Andriamanitra miaraka amintsika - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-01 > Andriamanitra miaraka amintsika
Mibanjina ny Krismasy isika, ny fahatsiarovana ny nahaterahan'i Jesosy 2000 taona lasa lasa izay ary tamin'izay Immanuel «Andriamanitra miaraka amintsika». Mino isika fa teraka Zanak'Andriamanitra izy, olombelona nofo aman-dra ary feno ny Fanahy Masina. Mandritra izany fotoana izany dia mamaky ny tenin'i Jesosy isika, izay mampiseho fa ao amin'ny Ray izy, ny fomba fiainany ao amintsika ary isika ao aminy.
Eny! Nofoanan'i Jesosy ny endriny masina rehefa tonga olombelona izy. Nampihavaniny tamintsika, ireo iray tampo aminy, noho ny fandatsahan-dra teo amin'ny hazofijaliana. Noho izany, amin'ny fahitan'Andriamanitra, isika dia madio sy tsara tanteraka toy ny lanezy vao milatsaka.
Iray ihany ny fepetra hiainana ity fifaliana mahafinaritra ity: Minoa an'ity fahamarinana ity, ity vaovao tsara ity!
Averiko amin’ny teny ao amin’ny bokin’ny Isaia 5 io fepetra io5,8-13 zavatra toy izao: Ny fisainany sy ny lalany dia mahery noho ny antsika, tahaka ny avo noho ny tany ny lanitra. Tsy miverina any an-danitra ny orana sy ny lanezy, fa vao mainka mandona ny tany sy mamoa mba ho sakafon’ny olona sy ny biby ary ny zavamaniry. Tsy vitan’izay anefa fa ren’ny olona maro koa ny tenin’Andriamanitra ary mitondra fitahiana tondraka.
Adidintsika ny mivoaka amin'ny fifaliana sy fiadanana ary mitory ity vaovao tsara ity. Avy eo, araka ny nolazain'ny mpaminany Isaia, na dia ny tendrombohitra sy ny havoana eo alohantsika aza dia hifaly sy hihoby ary ny hazo rehetra any an-tsaha hitehaka ary hifaly ary ... izany rehetra izany dia hatao ho voninahitr'Andriamanitra mandrakizay.
Ny mpaminany Isaia dia nanambara an'i Immanuel fito taona teo ho eo talohan'ny nahaterahany ary tonga tety an-tany tokoa i Jesosy hitondra fanantenana, fahatokisana ary fiainana mandrakizay ho an'ireo olona nokapohina sy kivy. Mandritra izany fotoana izany dia miverina eo anilan'ny rainy izy ary manomana ny zava-drehetra hananantsika miaraka aminy tsy ho ela. Hiverina hitondra antsika mody Jesosy.